MB 2016 Jona - Fiangonan'Andriamanitra any Suisse eran-tany
Iza moa izahay? > Taratasy amin'ny mpiasa avy amin'i J. Tkach > MB 2016 Jona
Ny maha-reny dia iray amin'ireo asa lehibe indrindra teo amin'ny famoronan'Andriamanitra. Tonga tao an-tsaiko izany rehefa nieritreritra ny vao haingana aho hoe inona no omeko ny vadiko sy ny rafozako amin'ny Andron'ny Neny. Tiako ny mahatadidy ny tenin-dreniko, izay nilaza tamiko matetika ny rahavaviko ary tena faly izy fa neny. Ny hananana antsika dia hanome antsika fahatakarana vaovao momba ny fitiavana sy ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Azoko ihany hoe rehefa teraka ny zanakay manokana. Mbola tsaroako ny fahagagana nataoko rehefa nihodina ny fanaintainan'ny vadiko Tammy tamin'ny fiterahana ho lasa fifaliana mahafinaritra rehefa mitazona ny zanakay lahy sy zanakay vavy izy. Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay dia efa natahotra aho rehefa mieritreritra ny fitiavan-reny. Mazava ho azy fa misy ny tsy fitoviana amin'ny karazam-pitiavako ary koa ny fitiavan-draiko izay niterahanay zanaka tamin'ny fomba hafa.
Raha jerena ny fifandraisana akaiky sy ny tanjaky ny fitiavan-dreny, dia tsy mahagaga ahy mihitsy ny nampidiran’i Paoly ny maha-reny tao anatin’ireo fanambarana manan-danja momba ny faneken’Andriamanitra tamin’ny olombelona, ​​toy ny nataony tao amin’ny Galatianina. 4,22-26 (Lotera 84) izao manaraka izao:
"Fa voasoratra fa Abrahama nanana zanaka roa lahy, ny iray tamin'ny andevovavy, ary ny iray tsy andevo. Fa ny an'ny andevovavy dia noforonina araka ny nofo, dia ny vehivavy afaka amin'ny fampanantenana. Ireo teny ireo dia manana dikany lalindalina kokoa. Fa ny vehivavy roa dia midika fanekena roa: ny iray avy amin'ny Tendrombohitra Sinay, izay miteraka fanandevozana, dia Hagara izany; fa Hagara dia midika hoe Tendrombohitra Sinay any Arabia ary fanoharana ho an'i Jerosalema izao, izay miaina amin'ny fanandevozana miaraka amin'ireo zanany. Fa ny Jerosalema any ambony dia afaka; izany no reninay. »
Nanan-janaka roa lahy i Abrahama: Isaka tamin’i Saraha vadiny sy Isimaela tamin’i Hagara mpanompovaviny. Teraka ho azy i Ismaela. Tamin’i Isaka anefa, dia nila fahagagana izany noho ny fampanantenana iray, satria i Saraha reniny dia efa tsy ampy taona intsony. Noho ny fanampian’Andriamanitra àry no nahaterahan’i Isaka. Naterak’i Isaka i Jakoba (novana hoe Israely ny anarany tatỳ aoriana), ka i Abrahama sy Isaka ary Jakoba no razamben’ny vahoakan’i Israely. Amin'izao fotoana izao dia zava-dehibe ny manamarika fa ny vadin'ny razambe rehetra dia tsy afaka manan-janaka afa-tsy amin'ny alalan'ny fitsabahan'Andriamanitra mihoatra ny natoraly. Ny rojom-pirazanana dia mitarika taranaka maro ho any amin’i Jesosy, Zanak’Andriamanitra, izay teraka olombelona. Vakio azafady izay nosoratan'i TF Torrance momba izany:
Ny fitaovana voafidin'Andriamanitra eo am-pelatanan'Andriamanitra hamonjy an'izao tontolo izao dia Jesosy avy any Nazareta izay avy any an-tratran'ny Isiraely - na izany aza dia tsy fitaovana fotsiny izy fa Andriamanitra mihitsy.Tamin'izay dia tonga tamin'ny endrik'olombelona ho mpanompon'ny toetra anaty antsika miaraka amin'ny Manasitrana ny fetra sy ny tsy fahatanterahany ary ny famerenana indray ny fiarahana velona amin'Andriamanitra amin'ny fomba mandresy amin'ny alàlan'ny fampihavanana amin'Andriamanitra amin'ny zanak'olombelona.
Mahafantatra an’i Jesosy isika ao amin’ny tantaran’i Isaka. Isaka dia teraka tamin’ny alalan’ny fitsabahana mihoatra ny natoraly, fa ny fahaterahan’i Jesosy dia noho ny fiheverana mihoatra ny natoraly. I Isaka dia voatendry ho mety ho sorona, nefa i Jesosy no tena sorompanavotana izay nampihavana ny olombelona tamin’Andriamanitra. Misy fitoviana koa eo amin’i Isaka sy isika. Ho antsika, ny fitsabahana mihoatra ny natoraly tamin'ny fahaterahan'Isaka dia mifanitsy amin'ny fahateraham-baovao (supernatural) amin'ny alalan'ny Fanahy Masina. Izany no mahatonga antsika ho rahalahin’i Jesosy (Jao 3,3; 5). Tsy zanak’andevo eo ambanin’ny lalàna intsony isika, fa zanaka natsangana, nekena ho ao amin’ny ankohonan’Andriamanitra sy ny fanjakany, ary manana lova mandrakizay any. Azo antoka izany fanantenana izany.
Ao amin’ny Galatiana 4, i Paoly dia mampitaha ny fanekena taloha sy ny fanekena vaovao. Araka ny efa novakintsika, dia nampifandray an’i Hagara tamin’ny vahoakan’ny Isiraely teo ambanin’ny fanekena taloha tao Sinay sy ny Lalàn’i Mosesy izy, izay tsy nampanantenaina ho mpianakavy na lova ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra. Amin’ny alalan’ny fanekena vaovao, i Paoly dia miresaka indray ny fampanantenana tany am-boalohany (miaraka amin’i Abrahama) fa Andriamanitra dia ho tonga Andriamanitry ny Isiraely sy Isiraely olony, ary amin’ny alalan’izy ireo no hitahiana ny fianakaviana rehetra eto an-tany. Tanteraka ao amin’ny faneken’ny fahasoavan’Andriamanitra ireo teny fikasana ireo. Nomena zanakalahy i Sara, teraka ho mpianakavy mivantana. Manao toy izany koa i Grace. Noho ny fahasoavan’i Jesosy dia lasa zanaka natsangana ny olona, ​​dia zanak’Andriamanitra manana lova mandrakizay.
Ao amin’ny Galatiana 4 dia manavaka an’i Hagara sy Saraha i Paoly. Nampifandraisin’i Hagara tamin’i Jerosalema i Paoly tamin’izany, izay tanàna teo ambany fahefan’ny Romanina sy ny lalàna. I Saraha kosa dia midika hoe “Jerosalema any ambony”, renin’ny zanaky ny fahasoavan’Andriamanitra rehetra misy lova. Be lavitra noho ny tanàna rehetra ny lova. Izy io no “tanàna any an-danitra” (Apokalypsy 21,2) an’Andriamanitra velona” (Hebreo 12,22) fa indray andro any dia hidina eto an-tany. Ny Jerosalema any an-danitra no tanàna niaviantsika, izay itoeran’ny tena maha-olom-pirenena antsika. I Paoly dia miantso an’i Jerosalema, izay any ambony, ilay tsy andevo; izy no reninay (Galatiana 4,26). Raha mifandray amin’i Kristy amin’ny alalan’ny Fanahy Masina isika dia olom-pirenena afaka ary eken’ny Ray ho zanany.
Misaotra an'Andriamanitra noho i Sara, Rebekka sy Lea, reny telo telo tamin'ny fanombohan'ny razamben'i Jesosy Kristy. Nofidinin'Andriamnitra ireo reny ireo, tsy lavorary toa azy ireo, ary koa i Maria, renin'i Jesosy, mba handefa ny zanany lahy eto an-tany ho tonga olombelona, ​​izay naniraka antsika ny Fanahy Masina mba hahatonga antsika zanaka ho an'ny rainy. Fotoam-pankasitrahana manokana ny Andron'ny reny noho ny fanomezana ny reny. Aoka isika hisaotra azy noho ny reny sy ny rafozan-bady sy ny vady - amin'ny reny rehetra. Ny reny dia tena fanehoana ny hatsaram-panahin'Andriamanitra mahatalanjona.
Misaotra ny fanomezan'ny reny